Akụkọ - Onye dọkịta na -awa plastik kpọrọ ngwaọrụ arụrụ arụ a na -adịghị emerụ ahụ "Grail Nsọ"
Otu dọkịta na-awa plastik kpọrọ ngwaọrụ ịkpụ ahụ a na-adịghị emerụ ahụ "Grail Nsọ"
Nke a abụghị ihe ijuanya, mana ọ naghị adịrị mfe ime nke ọma mọzụlụ. Ọ bụ ezie na ọ dịghị mkpa na ị ga-azụ ọzụzụ dị ka onye na-eme egwuregwu n'egwuregwu Olimpik iji nweta ihe ọkpụkpụ, ọtụtụ n'ime anyị ka na-agbasi mbọ ike iwepụ obere abụba ndị ahụ-ọkachasị afọ-nke yiri ka ọ dị isi ike karịa obere nwa "afọ abụọ jọgburu onwe ya". ”.”
Ọ dabara nke ọma, enwere nlekọta ụlọ ọrụ ọhụrụ akpọrọ ụlọ arụrụ arụ nke nwere ike ịgbake site na ịnọdụ ala na-enweghị ngwụcha. Ọ bụ ezie na ị nwere ike nụrịrị maka ngwaọrụ msculpt mbụ ahụ, ewepụtara ụdị ọhụrụ a n'oge na -adịbeghị anya yana, dịka a tụrụ anya ya, ọ kpaliri ndị ọkachamara.
"Akpọrọ m ya ngwaọrụ 'Holy Grail' n'ihi na ihe niile ọ nwere ike ime n'otu oge bụ ngwaahịa ọhụrụ n'ahịa," ka Louisville, MD, Kentucky dọkịta na -awa plastik Julene Samuels kwukwara.
IWU MUSCLEFDA kwadoro ugbu a maka iji n'ime afọ-na-eji ike elektrọnik elebara anya nke ukwuu (HIFEM) iji mepụta mmekpa ahụ nke otu anụ ahụ ezubere iche, nke na-eme ka uru ahụ na-abawanye ka oge na-aga. N'aka nke ọzọ, teknụzụ redio (RF) na -eme ka abụba dị n'okpuru anụ ahụ daa, na -eme ka abụba abụba nwụọ kpamkpam. "Na nke mbụ, [anyị nwere ike] gwọọ ma abụba a na -achọghị na ọchịchọ maka ịkpa oke ahụ ike n'otu usoro ọgwụgwọ," Dr. Palm kọwara.
Iji nweta uru dị ukwuu na ọgwụgwọ a, ọkà mmụta akpụkpọ anụ Chicago Carolyn Jacob, MD kwuru na ndị ọrịa ga -enwerịrị usoro ọgwụgwọ anọ n'ime otu ọnwa. “Mgbe anyị na -agwọ afọ n'afọ n'ọmụmụ ihe, anyị chọpụtara na mgbe ndị ọrịa nwesịrị ọgwụgwọ anọ - otu ọgwụgwọ kwa izu - maka ihe dị ka nkeji iri atọ ọgwụgwọ ọ bụla, ha hụrụ mbelata abụba 30% na mmụba 25% na oke akwara. Ọ kọwara.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ọrịa na -amalite ịhụ nsonaazụ dị mma na mbido ọgwụgwọ nke abụọ, Dr. Jacobs na -ekwu na ị ga -ahụ mgbanwe na ụda akwara tupu oke abụba. “Ọ na -ewe ogologo oge iji felata n'ihi na anụ ahụ na -edozi ya [ka oge na -aga],” ka ọ kọwara.
N'adịghị ka nhọrọ ịkpụzi ahụ ndị ọzọ, IWU MUSCLEnwekwara ike ịgwọ ọtụtụ ndị ọrịa. Dabere na Dọkịta Samuels, ọ nwere ike ịgwọ ndị nwere oke anụ ahụ (BMI) nke 20 ruo 35, ebe msculpt mbụ nwere oke BMI nke 30. Ọ dị gịrịgịrị, enweghịkwa ndepụta, ”Dr. Jacobs kọwara. “Mana maka ndị ọrịa ahụ kwesịrị iwepu abụba abụba, ha bụIWU MUSCLEndị ọrịa. ”
Ọ bụghị ihe ijuanya na ndị dọkịta natara ezigbo nzaghachi n'aka ndị ọrịa. “Ọrụ ahụ enweghị nchekasị, [ee] enweghị mgbu ọ bụla doro anya,” ka onye ọrịa Dr. Palm kwuru mgbe a jụrụ ya maka ịwa ahụ. “Tụkwasị na nke a, enweghị oge ezumike. Enwere m ike ịmaliteghachi ọrụ m ozugbo. ”
Otu n'ime ndị ọrịa Jekọb kwetara, na -ekwupụta na e jirila sentimita ole na ole belata ukwu ha na torsos ha dị ka egwuregwu karịa. A bịa n'echiche nke ngwaọrụ ahụ, onye ọrịa Dr. Jacob kwuru na ọ bụ mmetụta na -adịghị ahụkebe. "Ị ga -enwe mmetụta ya mgbe ha malitere igwe ahụ na nke mbụ ya," ka ha kọwara. "Ọ dị ka ị nwetụbeghị mbụ, mana zuru ike-nye ya nkeji ole na ole ka ị ga-amarakwa ya ahụ."
Dị ka e kwuru na mbụ, mmetụta ndị a na -enwe n'oge IWU MUSCLE ọgwụgwọ abụghị ihe ndị mmadụ na -enwekarị na mbụ. Ngwaọrụ ahụ na -ebu ụzọ nweta uru ahụ, wee hapụ, kwụsịtụ, wee malite ọzọ. “Oke ọkụ dị ka ịhịa aka okwute okwute,” ị ga -ahụ ahụ ọkụ, mana ọ gaghị enwe ahụ iru ala. ”
Agbanyeghị na o doro anya na ụlọ Muscle bụ ngwaọrụ mgbanwe nke ewepụtara n'afọ a, ọ dị mkpa iburu n'uche na achọrọ ọgwụgwọ ọzọ iji dowe ọnụọgụ ọhụrụ gị. N'ezie, mmega ahụ na iri nri dị mma bụ mkpịsị ugodi nke nsonaazụ kacha mma. Dị ka usoro ọ bụla, biko kpọtụrụ dọkịta gị iji hụ naIWU MUSCLEbụ oke nhọrọ gị. N'ịtụle nyocha ya dị mma, ọ bara uru ịjụ.